Ugbo | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ebumnuche dị iche iche nke ụwa, dị mkpa maka ịṅụ mmanya - Muscat Hamburg
Mkpụrụ vaịn ndị metụtara nutmeg, na-enwekarị acha odo odo. E wezụga bụ Muscat Hamburg. A na-ese tomato ya na agba anụnụ anụnụ, nke nwere obere uhie ma ọ bụ odo odo. O nwere otu ihe ọzọ. Ọ bụghị nke ma ọ bụ ọrụ nhazi ma ọ bụ iri nri. N'ịchọpụta oke mma nke mkpụrụ nke Muscat nke Hamburg ma maka ịkwadebe mmanya na maka ije ozi na tebụl, a kpọrọ mkpụrụ vaịn a na ụwa dum.
Ojiji nke mulberry, uru na nsogbu nye ahụike mmadụ
Mulberry (Moraceae) - osisi nke genus Mulberry (nke a na-akpọ "mulberry", osisi nke dị elu ruru 20 mita). Ụdị nke a gụnyere ihe karịrị mkpụrụedemede 17 nke osisi nke obere ụlọ bụ Peshia. Ọ dị mfe nghọta na mulberry: o nwere epupụta na-egbuke egbuke, na-egbuke egbuke, na tomato nke dị ka blakberị.
Quince: ọdịda na nlekọta
A na-achọta ire ere nnukwu mkpụrụ osisi siri ike, dị ka apụl ma ọ bụ pears, a na-akpọ "quince". O nwere ọtụtụ uru bara uru, ma maka kacha mma utịp nke osisi ọ dị mkpa iji nye ezigbo ọnọdụ nke ibu na mmepe. Ka anyi gbalịa ichota ihe ajuju bu na otu esi eche ya.
Otu esi akụ na-eto eto irgu n'ubi gi
Ọ na-emekarị na osisi ndị dị egwu nke na-achọ nlekọta na nlekọta na-elekọta mgbe nile na-enye nlebara anya dị ukwuu, a na-emeso ndị na-adịghị mma na-akpachapụ anya. Ọ bụ ọdịbendị dị otú ahụ na ọ bụ irga. A na-ahụkarị ya n'ebe dị n'azụ ụlọ azụ. Mana ọ bụghị onye ọ bụla maara na irga bụ osisi pụrụ iche nke ornamental, bụ nke dị oké ọnụ ahịa n'ọtụtụ mba.
Ọganihu na-eto eto n'ogige
N'ezie ọtụtụ ndị ọ dịkarịa ala otu oge ga-akwụsị na mmiri ahụ n'ihu ụlọ ma ọ bụ n'ubi onye mmadụ, n'amaghị ama na-adọrọ mmasị na foto pụrụ iche - pink pink, white ma ọ bụ odo odo na osisi mara mma nke na-adighi ike na-enweghị akwụkwọ. Ọ na-agbaji magnolia. N'ileba anya na mbu o nwere ike iyi na ndi oru ugbo nwere ihe omumu puru ime ihe oru ebube a, n'inye ego buru ibu ma tinye otutu ihe n'ime ya.
Akwukwo apricot: nkpa kwesiri ya na nlebara afo mbu
Onye ọ bụla ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ ya, karịsịa n'oge ọ bụ nwata, na-eli nkume n'ala. Na akwukwo a bu lemons, oranges, apples. Ha na-etolite etolite, nke nyere ọbụna obere epupụta. Ma mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ma ọ bụ wilting ma ọ bụ ohia toro na-acha akwụkwọ ndụ dum, nke na-amịghị mkpụrụ. Ị ma otú e si eto apricot site na nkume dị n'ụlọ?
Olee otú iji na-emeso ọrịa nke apricot
A na-ewere Armenia ebe ọmụmụ nke apricot ụtọ. O toro ogologo oge na India na China. N'ihi ijikọ ụwa ọnụ, mkpụrụ a dị ịtụnanya agbasawo gburugburu ụwa. Aprịkọt bụ osisi na-eguzogide ọrịa, ma n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ nwere ike ibute ọrịa dị iche iche. Ya mere, na-eto eto osisi apricot n'ubi gị, i kwesiri ịkwadebe maka ịlụso ọrịa ndị a ọgụ.
Na-elekọta euonymus n'ụlọ
Mgbe ụfọdụ, otu osisi shrub na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke. Ha na-adọrọ mmasị nke ukwuu na m chọrọ ịnwale ha. Nke a bụ euonymus. Mkpụrụ osisi oriri nke euonymus na ebee ka a ga - akpọ ha na ọgwụ ndị na - egbu mmadụ ma ọ bụ ọgwụ? Euonymus nwere ihe karịrị ụdị 200 ma jiri ya eme ihe n'ubi.
Olee otu esi ahọrọ uzu maka ogbugba mmiri n'ubi: ụdị na njirimara nke hoses ubi
Ọ gaghị ekwe omume iche na osisi ahụike dị mma na nke mara mma na-enweghị ihe ọzọ atọ, nke a na-eme site n'enyemaka nke hoses. E nwere ọtụtụ ụdị hoses ndị dị iche iche na ọ bụghị naanị n'ọdịdị kamakwa na mma. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ihe ka mma ịhọrọ nchara maka mmiri mmiri, otu esi echekwa ya ma rụọ ya.
Ụdị kachasị iche na ụdị almọnd
Almond bụ osisi ma ọ bụ osisi shrub nke mkpụrụ osisi plums. A na-ewere n'ala nna nke osisi ahụ dị ka Mediterranean na Central Eshia. N'oge a, a na-akọ ya na China, USA, na Crimea na Caucasus, na Russia, Slovakia na Czech Republic, na Moravia. A na-ekezi almọnd nkịtị Almond nkịtị n'ime abụọ ala: ahịhịa (ilu) almọnd na almọnd dị ụtọ.
Iwu maka ịhọrọ ubi pruner
N'ime ọtụtụ ngwaọrụ ndị e bu n'uche maka nlekọta nke osisi ubi, pruner bụ otu n'ime ndị a ma ama na n'echiche na ọbụna mmadụ ole na ole nwere mmasị n'ịgba ugbo ghọtara aha ngwá ọrụ ahụ maka ihe ọ bu n'obi. Ị ma? Ndị isi nzuzo nke mbụ pụtara na mmalite nke narị afọ nke 19 yiri ndị isi ugbu a ma jiri ha mee ihe iji belata osisi vaịn ahụ.
Mmeputakwa nke osisi plum: owuwe ihe ubi, gbanyere mkpọrọgwụ, kụrụ ma lekọta
Onye ọ bụla na-elekọta ubi nwere osisi ndị kacha amasị ya. Ọtụtụ mgbe, mmasị kachasị mma na nwa-nwanyi na-aghọ ihe na-atọ ụtọ na-eto eto n'ubi. Plum dị mma ọ bụghị nanị maka uto ya, ọ nwere ọtụtụ ihe ngwọta. Mkpụrụ a bara ọgaranya na magnesium, ígwè, zinc, vitamin C, na usoro nke uto na-emepụta vitamin B2, na-akwalite carbohydrate metabolism.
Nlekọta na ịmalite jujube
Na mpaghara nke ndị bi n'oge okpomọkụ, ọ na-esiwanye ike ịhụ osisi ndị nwere osisi na osisi ndị na-adịghị ahụkebe na ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ arụmọrụ, kama ha nwekwara ike ịme ihe ubi bara uru. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere otu n'ime osisi ndị a, mara ozugbo n'okpuru ọtụtụ "aha": zizifus, unabi na ụbọchị Chinese.
Boric acid maka osisi: otu esi eji na ulo
Boric acid dị oké mkpa maka mkpụrụ osisi niile, akwukwo nri, beri na ornamental crops. Ọ bụghị nanị na-echebe ha site na ụmụ nje, kama ọ na-emekwu ka mkpụrụ, na-eme ka mmụba na ọdịnaya shuga. Ihe si na ya pụta bụ ihe na-atọ ụtọ, mkpụrụ osisi dị elu. Ọzọkwa, osisi ndị a na-emeso adịghị edozi, mkpụrụ ha anaghị agbaba mmiri mmiri.
Tunbergia abatakwa ezinụlọ acanthaceae. A na-ewere ala nna ya dị ka ebe ndịda Africa. E nwere ihe dị ka ụdị 200. Aha osisi ahụ bụ nkwanye ùgwù nke onye na-ahụkarị Swedish bụ Karl Peter Thunberg. Ifuru ahụ ka nwere aha ọzọ - "black-eyed suzane". M na-akpọ ya ya n'ihi agba nke etiti ifuru - acha odo odo.
Na-eto Norway maple na mpaghara
Maple bụ osisi mara mma. Enwere ike ịchọta ya ebe niile: na ogige ntụrụndụ na n'ámá, n'ọhịa, na ụlọ ezumike. Ọ na-adọta anya n'ihi mma openings nwa ehi na okpueze, mkpụrụ osisi ọhụrụ. Karịsịa mara mma na ọdịda, mgbe a na-ese akwụkwọ ya na agba odo odo: odo, oroma, odo odo.
Kedu ụdị ụdị pọmmadị dị mma maka ịkọ ihe na ala ịta ahịhịa
Akpa udiri, nke otutu ndi mmadu na-ewere na ha bu oke osisi, na-ejikorita onwe ha na ndi mmadu ndi na-ekpo ekpo. Achọrọ m na osisi ahụ ga-abụ obodo maka mpaghara Moscow, nakwa na ụdị ya dị iche iche nọchiri ya. A na-eri nri ndị a nanị n'ihi obere osisi ahụ, nke na-esi na ya agafe. Ugbu a, ihe dị na ala ịta ahịhịa dị mkpa dị ka ndị subtropics.
Udi udiri: kuru na ilezi anya
Nye ọtụtụ ndị, a na-ejikọta cherry nnụnụ na mmalite oge opupu ihe ubi, n'ihi na ọ bụ ísìsì ya nke jupụtara na ikuku mmiri, na otú nnụnụ ndị cherry si eme ka mkpali si n'ike mmụọ nsọ. Ụdị osisi a dị oké ọnụ ahịa na ala a họọrọ, àgwà ya, ngwakọta nke mmiri, yana ịgbara mmiri na ọkụ.
Agrotechnology cultivation of plum "Stanley" ("Stanley"): ụdị àgwà, ịkụ ihe na nlekọta
Maka ezigbo owuwe ihe ubi nke plums, i kwesịrị ịhọrọ ụdị dị iche iche. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na-adọrọ mmasị ma na-ewu ewu. Otu n'ime ha bụ Stanley plum ("Stanley") - nkọwa zuru ezu nke ụdị dịgasị iche iche, yana isi ihe ndị a na-eme n'ubi, nwere ike ịchọta na ihe a. Akwukwo ihe omuma di iche iche "Stanley" di iche iche "Stanley" sitere na USA.
Coreopsis bụ ifuru nke ezinụlọ Astrov, osisi na-eto eto ma ọ bụ kwa afọ. Site na Coreopsis site na North na South America, ebe ọ na-etolite ebe nile ọbụna n'okporo ụzọ. Ndị na-eto ugbo na-ahụ maka okooko osisi ogologo na ike nke ịgha mkpụrụ ma na-elekọta. Coreopsis kwa afọ Coreopsis annuals bloom longer than their relatives long-term, often even more magnificent.
Nkuzi nke ọnwu na oge okpomọkụ
Bubbyplodnik bụ osisi shrub mara mma nke na-anọgide na-enwe mmetụta ọkpụkpụ ya n'oge dum vegetative. Na-eme ka okpueze dị arọ nke okpukpu abụọ na-arị elu. Akwụkwọ a na-edozi ya na-enye ya ụdị ọdịdị. Tinyere ihe dị elu nke a na-eji achọ mma, a na-ahụ ihe dị mma site n'ịdị na-emepụta ihe.